Budapest na ụgbọ elu Dubai bidoro site na flydubai
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Budapest na ụgbọ elu Dubai bidoro site na flydubai
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Site n'iji 737-800s, nke ahaziri ya na klaasị azụmaahịa na akụ na ụba, flydubai ga-atụnye oche 35,000 ọzọ na ahịa Budapest kwa afọ.
flydubai ga-abu uzo ohuru nke ndi Hungaria na Dubai n’oge mgbụsị akwụkwọ a.
Riergbọ ọrụ ndị dabeere na Dubai ga-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu na obodo ukwu nke Middle East.
Ọrụ flydubai, nke ga-arụ ọrụ na codeshare na Emirates, ga-enye ndị njem nhọrọ karịa Dubai na gafere.
Ọdụ ụgbọ elu Budapest ekwuputala na flydubai ga-abụ njikọ ọhụụ nke Hungary na Dubai n'oge mgbụsị akwụkwọ a. Kwenye na ụgbọelu Dubai ga-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu na obodo nke Middle East, ọrụ afọ ga-ebido na 30 Septemba. N'iji usoro nke 737-800s, nke ahaziri ya na klaasị azụmaahịa na akụnụba, ụgbọ elu ga-enye mgbakwunye oche 35,000 na ahịa Budapest kwa afọ.
N'ikwu banyere mgbakwunye nke onye ọrụ ụgbọelu ọhụrụ ya, Balázs Bogáts, Onye Isi nke Development Airline, Ọdụ ụgbọ elu Budapest kwuru, sị: “Anyị nwere ọ overụ ọ toụ ịbụ akụkụ nke flydubai'ịgbasawanye European network na ịnabata ụgbọ elu ọhụrụ na ndepụta nke ndị buda nke Budapest ka ndị ọrụ chọtara ikike ọdụ ụgbọ elu anyị. Bogáts gbakwụnyere, “Njikọ ọnụ ụlọ ọrụ Dubai dị ezigbo mkpa maka ndị njem anyị, yabụ na anyị nwere obi ụtọ na flydubai ga-agbakwunyekwu ikike yana ime ka ndị njem na-achọ Budapest ohere ịchọ ebe ọhụụ.
Ọrụ flydubai, nke ga-arụ ọrụ na codeshare na Emirates, ga-enye ndị njem nhọrọ karịa Dubai na gafere. Site na njedebe 168 n'etiti netwọk ụgbọ elu abụọ ahụ, ndị njem ga-enwe ohere ijikọ site na ọdụ mba Dubai na ọtụtụ mba gụnyere Asia, Africa, Australia, na USA.
flydubai, nke iwu kwadoro Dubai Aviation Corporation, bu ugbo elu nke gọọmentị nwere na Dubai, United Arab Emirates nke nwere isi ulo oru ya na oru ugbo elu na Terminal 2 nke Dubai International Airport. Linegbọ elu ahụ na-arụ ọrụ njedebe 95, na-eje ozi na Middle East, Africa, Asia na Europe site na Dubai.